Adoolessa 11, 2016
Poolisoota Saawiz Suudan magaala Juubatti eegumsa gochaa jiran,Adooleessa 10, 2016.
Loltoota Saawiz Suudan pireesdantii biyyatti Saalvaa Kiirii amanamoo ta’anii fi loltoota garee itti aanaa Pireesdaantii Riik Machaarii edduutti walitti bu’iinsii umamuu isaatiin dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa magaala gudditti biyyatii Juubaatti dhagahamaa tureera.
Pireesdaantiin Saawiz Suudan qaamni lachuu dhukaasa akka dhaabu gaafate.
Jeequmsa ka’e irratti amma kaleessaatti namoonnii 276 du’uu isaanii Raadiyoon biyyicha keessaa tamsaasu tokkogabaasuus, dubbii himaan Riik Machsar garuu nama 150tu du’e jedha.
Pireezdaantiin Kora Naga’a Egumsaa Mootummoota Gamtoomanii Kooro Beshon sambata kaleessaa akkataa jeequmsa Juubaatii ummaamee fala itti barbaadan irratti wajjira korichaa Niwyoorkitti argamuu ergaa dabarseen qaama nagaha eegumsaa mootummoota gamtoomanii Saawiz Suudan jiru keessaa lammin Chaayinaa tokko dudhaa fi lammiiwwaan Ruwaandaa bayyeen madahuu isaanii beeksiisuudhan hallii Suudaan Kibbaa haalaa atattamaan hiikoo barbaadu ta’uu isaa dubbate.
Walitti Bu'insi Loltoota Saawiz Suudaan Lubbuu Baayyee Galafate
Ministirri Haajaaa allaa Yunaayitid Isteets haalla juba jirurraa ka’iudhan han gargaarsa attattamaa irratti hojjatanii achi ,hojjattoonii isaa hudii Imbaasii Jubaatii akka bahan ajejeera. Lammiiwaan Ameerikaas Saawiz Suudan dhaqurraa akka of qusatan akeekkachiisera wajjirri kun.
Dahabbileen adda addaa jeequmsi kun aka dhaabbatu gaafachaa jiraatanis, harraas,guyyaa shanaffadhaa dhukaasnii meeshaa waaraanaa gurguddaa magaala Juubaatti dhagahamuun isaa beekkameera.
Itiyoopiyaan Gola Naga Eegumsaa kan Tokkummaa Mootummootaa Keessaa Teessuma Argatte
Bokkaan kalee barraaqa Adaamaatti roobe waan hedduu balleessee nama 4,500 baqachiise
Dura taa’aa gamtaa Afriikaa haaraa filachuun ajandaa gumii gamtichaa ta’uuf jira.
Daalaasitti hiriira mormii booda naamoonni dhokatanii qawwee namatti dhukaasan poolisii shan ajjeessan
Muummichi MInisteeraa Israa’el Benjamin Natanyaahuu kaleessa galgala Finfinnee seenan
Yunaayitid Isteets, Kutaa Daalaasitti Haleellaan Poolisoota Galafaate Waggaa 15 Keessatti Isa Hamaa Dha Jedhame